Guernsey, Sark, i-Guernsey
Ikhaya lethu liyindawo yokulala eyenziwe ngokhuni esanda kwakhiwa (2017) efakwe wonke ama-mod cons, etholakala ngasempumalanga yesiqhingi esincane saseSark futhi sifinyeleleka kalula ngaphandle kokwenyuka sehle intaba ukusuka maphakathi nesiqhingi.
Sinikezela ngokusetshenziswa kwegumbi lokulala elilodwa negumbi leshawa elizimele, elilungele ukuhlala abantu abangabodwa noma ababili (abantu abadala kuphela.)
Sinemibono emihle nge-Alderney eNyakatho, ugu lwaseFrance oluya eMpumalanga kanye neJersey eningizimu. Ngosuku olucwathile ungabona ngisho ne-Les Écréhous.
Ikamelo lakho lokulala lingafinyelelwa ngokuqondile eminyango yevulandi ngaphambili. Ukufinyelela egunjini lakho lokugeza kungaphesheya kwephasishi elizokhawulelwa kusihlwa/ebusuku ukuze ulisebenzise kuphela ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Ikhaya lethu lisonqenqemeni lwenkundla enezinye izakhiwo eziningi eziqhelelene nathi; lokhu kusinikeza isikhundla esithule futhi esingaphazamiseki.
Sithanda ukuzijabulisa nezivakashi zethu uma zithanda, kodwa sicela uqaphele ukuthi siqhuba namanye amabhizinisi ethu sisekhaya ngakho-ke singase singatholakali kwezinye izindawo lapho uhlala khona.